asthenic-नसहरुको सिंड्रोम को अवस्थामा पछिल्लो केही दशकहरु एकदम वृद्धि। यस्तो मानसिक विकार सामान्यतया स्नायु प्रणाली को एक कार्यात्मक वा भावनात्मक थकान संग सम्बन्धित छ। स्थिर थकान रोग, मानव जीवन को गुणस्तर असर भनेर दाह को bouts बदलिएको छ जो सँगसँगै।
asthenic-नसहरुको सिंड्रोम को मुख्य कारण
अक्सर, यस्तो उल्लंघन निरन्तर तनाव, भारी मानसिक काम, भावनात्मक तनाव को परिणाम हो। अहिलेसम्म यो मानसिक विकार को उपस्थिति अन्य कारण छन्।
विशेष मा, जोखिम कारक टाउको चोट समावेश - पनि सानातिना झटके मस्तिष्क को सामान्य सञ्चालनको उल्लङ्घन गर्न सक्छ। सिंड्रोम जस्तै बच्चाहरु intrauterine hypoxia, भाइरल वा जीवाणु संक्रमण को परिणाम हुन सक्छ। साथै, रोग अक्सर मेनिनजाइटिस वा encephalitis पछि हुन्छ।
कारण सामान्यतया विषाक्तता, केवल तीव्र छैन तर पनि पुरानो, रक्सी, ड्रग्स, केही दबाइहरु र निकोटीन दुरुपयोग कारण श्रेय। अनुचित आहार, गरिब परिसंचरण मस्तिष्क, को excretory सिस्टम को भिटामिन कमी रोगहरु - यस्तो उल्लंघन को विकास गर्न सक्छ सबै जो।
asthenic-नसहरुको सिंड्रोम को मुख्य लक्षण
दुर्भाग्यवश, क्लिनिकल तस्वीर रोग समान पनि उज्ज्वल छैनन् छ। अक्सर रोग को पहिलो लक्षण, विरामीहरु सामान्य थकान मा दोष। पहिलो, नियम, त्यहाँ थकान, साथै छ स्थिर निदाउरोपनको। lethargy को अवधि चाँडै बलियो आन्दोलन र जलन बदलिएको। बिरामी मान्छे, धेरै भावनात्मक र संवेदनशील छन् तिनीहरूले निराशा थप खतरा हो। भोक, समस्या सुत्ने, टाउको दुखाइ, कमजोरी र चक्कर आना उल्लङ्घनको पनि छ।
बच्चाहरु मा, रोग जस्तै मुड swings, moodiness, बारम्बार hysterics मा व्यक्त गरिएको छ। वयस्क मा Asthenic-नसहरुको सिंड्रोम अक्सर आवर्तक निम्त्याउँछ आतंक आक्रमण। तिनीहरूले हृदयमा दुखाइ जल, छिटो धडकन, सास को गंभीर shortness सँगसँगै छन्।
वाकवाकी, बेहोशी, गति रोग - यो पनि asthenic-नसहरुको सिंड्रोम को लक्षण छ। उल्लङ्घनको यस्तो पृष्ठभूमिमा एकदम अक्सर र यस्तो भीड, claustrophobia र अरूको डर रूपमा phobias, एक विस्तृत विविधता विकास।
asthenic-नसहरुको सिंड्रोम कस्तो व्यवहार गर्ने?
निस्सन्देह, बाहिर आंकडा पहिलो डाक्टर शारीरिक विकार वा शरीर को कुनै पनि अन्य रोगहरु को रोग को परिणाम कि छ। यस्तो अवस्थामा यो भयातुर सिस्टम सामान्य फर्के को काम को लागि प्राथमिक कारण छुटकारा गर्न पर्याप्त छ।
यदि asthenic-नसहरुको सिंड्रोम को मनोवैज्ञानिक प्रभाव कारण छ, चिकित्सा गतिविधिहरु को दायरा समावेश गर्नुपर्छ। निस्सन्देह, विरामीहरु जस्तै नरम बेहोशि औषधि (tincture motherwort वा valerian) वा, conversely, रूप, उपयुक्त दबाइ निर्धारित छन् tonicity एजेन्ट, रक्त र स्नायु तन्तु (जस्तै, लागूपदार्थ "Demanol" "Cortexin"), साथै भिटामिन र खनिज को परिसर को trophism सुधार लागूपदार्थ ।
तर चिकित्सा को एक धेरै भाग पनि एक स्वस्थ जीवन शैली छ। , तनावपूर्ण अवस्थामा जोगिन खराब बानी परित्याग र आहार पालना सकेसम्म बाहिर समय खर्च, मध्यम शारीरिक काममा संलग्न, बिरामी मान्छे सही उपचार कार्य र आराम गर्न सुझाव दिन्छौं। केही अवस्थामा एक मनोचिकित्सक द्वारा उपचार गर्न आवश्यक छ। एकयुपंचर को राज्य मा राम्रो प्रभाव, आराम को मालिश, भौतिक चिकित्सा, Reflexology।
Plantar Warts: उपचार प्रभावकारी तरिकाहरू
एडी spurs। यो रोग र कसरी यो युद्ध गर्न के हो?
Bankarta क्षति। काँध संयुक्त अस्थिरता को उपचार
Angioedema। तुरुन्त एलर्जी प्रतिक्रिया को लागि पहिलो सहायता।
नेविगेटर कार समीक्षा प्रयोगकर्ताहरूको लागि प्रशंसा भरिएका छन् जो
प्लास्टिक सर्जन Varashkevich एन्ड्रयू Albertovich: जीवनी
Raymon Puankare: जीवनको तथ्य
आफ्नो हातले आभूषण तार: एक मास्टर वर्ग
अस्पताल "को काकेशस को पर्ल", Essentuki: समीक्षा, फोटो
होटल Barceló Punta Cana (Punta Cana / डोमिनिकन गणतन्त्र)
"Maynkraft" मा अर्को rasprivatit इलाका रूपमा?
रस "Multifruit": हानि र लाभ
पृथ्वीको कोर। शिक्षा को एक संक्षिप्त इतिहास
भविष्यमा आमा र बच्चा को स्वास्थ्य को लागि एक जरूरी गर्भवती महिला को लागि आहार
Aiyaree स्थान होटल3* पटाया: समीक्षा, फोटो, वर्णन